Heerka Shiidaalka sensor-saareyaasha - Shiinaha Shiidaalka Heerka sensor Factory & Shirkado cusub
Kor U Heerka sensor JT606
Kor U Heerka sensor JT606D
Kor U Heerka sensor JT606X
Kor U Heerka sensor JT550
Tiga Product, Choice Best Waayo Monitoring Isticmaalka Shiidaalka Remote.
taxane JT606 sax sare shidma heerka shidaalka waxaa loogu talagalay maamulka dhaafin fog on isticmaalka shidaalka. Waxaa la horumariyo by Jointech madax banaan, marka la isku daro technology shidma top on dunida, oo ah teknoolajiyada tiga cusub. Waxaa si joogto ah lagu ogaan karaa heerka dareeraha la xallinta sare (<1mm), iyo sidoo kale qabsato oo dhererkiisuna wuxuu ku haboon taangiyada saliidda kala duwan oo ku saabsan kaalinta, iyo bedelo shidma asalka heerka shidaalka baabuurta in ay ku xidhmaan mitirka shidaalka asalka ah.
Gaar Design, Ujeedo dhaliyaha
Sida ay sanado badan waayo-aragnimo ah oo ku saabsan rakibidda kaalinta, horumar joogta ah, this awood JT606 uu awood xoog leh la qabsado deegaanka warshadaha iyo macdanta kala duwan adag.
Jari karaa shidma Shiidaalka jari karaa sida ay size taangiga shidaalka on site Iska dulqaadka ay keento size khalad
High-sax Aqoonsiga saxsanaanta ka yar tahay 1mm shidma The tilmaami karaa is beddel heer ka yar 1mm ah
Rakibaadda Simple design xiranayo flanges kordhaya fudud rakib shidma uma baahna darsin kale godad fur button Press for dhaqmaan buuxa iyo madhan on site
Danab aqbasho Wide, ilaalinta sare iyo circuit 4-70V kala duwan oo danab la gelin ballaaran, hubi in shidma ma aha sarkhaansan danab talooyin ah. Ilaalinta Multi circuit, ilaalinta xiriir dambe, ilaalinta circuit gaaban.
Multi-signal saarka saarka danab (0-5V), wax soo saarka ee hadda (4-20mA) saarka iska caabin ah (0-500Ω) Digital signal wax soo saarka: RS232, RS485 kulan la socodka fog iyo gacanta halka baabuur-wadidda eeg baabuurka
Badan Hardware, Experience More Sharing Waayo,
Jointech ma aha oo kaliya soo saaraha shidma heerka shidaalka, laakiin sidoo kale waxay bixiyaan shidaalka xal la socodka sanado badan macmiilka oversea. Jointech ayaa helay waayo-aragnimo qani ah oo ku saabsan rakibidda kaalinta, shidma keenidda, dib processing dhulka, iyo falanqaynta warbixinta.
On kormeerka rakibo site
The isdhexgalka qalab waayo-aragnimo la wadaago
Shiidaalka falanqaynta xogta isticmaalka iyo warbixin-aragnimo wax soo saarka la wadaago
JT606 waxaa si balaadhan looga isticmaalo noocyada kala duwan ee gaadiidka iyo mishiinada on dunida.
gaari gaadiidka Logistics